Home » Lahatsoratra farany farany » Interviews » Birao afrikanina momba ny fizahantany: fizahan-tany tsy misy sakana izao!
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Interviews • Vaovao • People • Tourism • Dinika fizahan-tany • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny firenena enina mpikambana ao amin'ny Vondrona Afrikanina Atsinanana (EAC) dia nanao ny Expo fizahantany ara-paritra voalohany (EARTE) tany Tanzania tamin'ny Oktobra tamin'ity taona ity. Ity hetsika fizahan-tany isam-paritra ity dia hampiantranoin’ireo fanjakana mpiara-miombon’antoka amin’ny fihodinana amin’ny taona ho avy.
Ny EAC Council of Tourism and Wildlife Ministers dia nanohana tamin'ny tapaky ny taona, ny Expo isan-taona any Afrika Atsinanana (EARTE).
Tanzania dia voafidy hampiantrano ny EARTE voalohany miaraka amin'ny lohahevitra "Fampiroboroboana ny fizahan-tany mahomby ho an'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena." Nikatona tamin'ny fiandohan'ny herinandro lasa teo ny Expo.
The Biraon'ny fizahantany afrikanina (ATB) Nisolo tena ny filoha mpanatanteraka Atoa Cuthbert Ncube niaraka tamin'ny solontena hafa ivelan'ny vondrona EAC.
Nanao lahateny mpanatanteraka momba ny andraikitry ny ATB amin'ny fampandrosoana ny fizahantany aty Afrika Atoa Ncube.
eTN: Inona no vina voalohan'ny Birao momba ny fizahantany any Afrika manoloana ny fizahantany any Afrika?
NCUBE: Ny tanjonay voalohany dia ny hahazoana antoka fa ho lasa "Afrika"Toeram-pizahan-tany iray” ny safidy eto amin'izao tontolo izao. Mifantoka amin'ny fampandrosoana, ny fampiroboroboana ary ny fivarotana ny fizahan-tany any Afrika amin'ny alalan'ny fomba samihafa izahay.
Tafiditra ao anatin'izany ny lobbying, ny fanetsiketsehana ny loharanon-karena, ary ny fitaomana ny fanaovana politika mba hahazoana antoka fa ho lasa “Toerana Safidy iray ho an'izao tontolo izao” i Afrika.
Ny Birao (ATB) dia miara-miasa amin'ny governemanta afrikanina amin'ny sehatra samihafa izay heverinay fa hanafaingana ny firoboroboan'ny fizahantany aty Afrika. Anisan’izany ny fanesorana ireo sakana eo amin’ireo firenena 54 afrikanina mba hisarihana ny fizahan-tany anatiny afrikanina.
eTN: Ahoana no anampian'ny Birao Afrikana fizahantany ireo firenena afrikanina hahazo bebe kokoa amin'ny fizahantany?
NCUBE: Ny Biraon'ny fizahantany Afrikana dia manolo-tena hanampy ny governemanta, ny sehatra tsy miankina, ny vondrom-piarahamonina ary ny mpandray anjara hafa amin'ny fampiroboroboana sy fanamorana ny fitomboan'ny fizahantany sy ny fampandrosoana any Afrika.
Miara-miasa amin’ny Firenena Mikambana (ONU) sy ny Vondrona Afrikanina (UA) izahay amin’ny fanatanterahana ny hetahetan’ny AU Agenda 2063 sy ny tanjona 2030 UN Sustainable Development Goals (SDG) amin’ny alalan’ny fizahantany.
Anisan'izany ny marika, ny varotra ary ny fampiroboroboana an'i Afrika ho toerana fizahan-tany tokana eo amin'ny sehatry ny tsenan'ny fizahantany manerantany.
Ny filankevi-pitantanan'ny fizahantany kaontinanta (ATB) eto amintsika dia manao lobbying amin'ny alalan'ny governemanta Afrikana, fikambanana mpandraharaha, fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, ny Vondrona Afrikanina, ary ny vondrona ao amin'ny Firenena Mikambana ary ny vondrona isam-paritra mba hiantohana ny fivezivezena malalaka ho an'ny olom-pirenena Afrikana ao Afrika avy amin'ny firenena iray mankany amin'ny firenena hafa.
eTN: Fihetsiketsehana sy sokajin'olona inona no kendren'ny ATB?
NCUBE: Ny tanjona dia ny handehanan'ny Afrikana ao Afrika, manomboka amin'ny firenena onenana - ny olona handeha any amin'ny tanindrazany amin'ny maha-mpitantany an-toerana azy, avy eo amin'ny fanjakana isam-paritra, ary any Afrika manontolo. Nanokatra lalana ho an’ny sokajy fizahantany rezionaly tahaka izao ny Vondrona Afrikanina Atsinanana (EAC).
Hitantsika ny Kenyana mitsidika an'i Tanzania sy ireo mpikambana ao amin'ny vondrona EAC hafa, mitovy amin'ny Tanzaniana sy ny sisa. Afaka mitsidika an'i Tanzania Andrefana, Ouganda, ary Rwanda ny olona avy amin'ny vondrona EAC sisa mba hijery chimpanzees, gorila izay tsy hita amin'ny mpikambana hafa.
Fanampin'izany, ny ATB dia manao antso avo amin'ny fivezivezena mora amin'ireo mpizahatany vahiny rehetra mba hampihatra ny visa tokana hiampitana sisintany any Afrika. Mety hahasarika mpizahatany vahiny bebe kokoa handany andro maromaro any Afrika izany amin'ny alàlan'ny hetsika mora miampita sisintany amin'ny alàlan'ny visa tokana.
eTN: Any ivelan'i Afrika Atsimo sy Afrika Avaratra Arabo, inona no ataon'ny Birao hanampiana an'i Afrika atsimon'i Sahara hahazo bebe kokoa amin'ny fizahantany?
NCUBE: Niara-niasa tamin’ny firenena afrikanina maromaro izahay tamin’ny fikarakarana fampirantiana fizahan-tany mikendry ny fizahantany anatiny sy isam-paritra. Nanana fampirantiana toy izany tany Tanzania izahay tamin'ny taon-dasa (2020) - ny UWANDAE Expo.
Ekipa solontenan'ny ATB avy any Sierra Leone, Nizeria, Afrika Atsimo, Botswana, Ghana, Etiopia ary Ejipta no nandray anjara tamin'ny ARTE tany Arusha. Nisy fiantraikany teo amin'ny asantsika ny fameperana fitsangatsanganana amin'ny valan'aretina COVID-19, saingy mbola manohy hatrany isika.
Ny Birao Afrikana momba ny fizahantany dia miara-miasa amin'ny International Tourism Investment Conference (ITIC) amin'izao fotoana izao ho an'ny fampiasam-bola kaontinanta amin'ny fampiroboroboana ny fampandrosoana ny fizahantany any Afrika.
Amin'ny alalan'ny ITIC, ireo mpampiasa vola avy any Bolgaria amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpampiasa vola hafa, dia hanangana ny tetikasa $72 tapitrisa amin'ny trano fandraisam-bahiny 4 any avaratr'i Tanzania, ao anatin'ny valan-javaboary Tarangire, Lake Manyara, Serengeti, ary Ngorongoro.
Tanzania no mpandray tombony voalohany amin'ny fampiasam-bola ITIC izay handray an-tanana manomboka amin'ny Janoary amin'ny taona 2022.
Ny Birao koa dia miara-miasa amin'ny governemantan'ny Fanjakan'i Eswatini ary nametraka paikady hampiroboroboana ny kolontsaintsika Afrikana. Ny fampisehoana ara-kolontsaina sy ny vakoka dia ampahany amin'ny fizahan-tany an-trano sy ara-kolontsaina izay misarika olom-pirenena marobe ho amin'ny fampandrosoana ny fizahantany anatiny.
eTN: Ahoana no anampian'ity Birao ity hanatsarana izany?
NCUBE: Ny Biraon'ny Fizahantany Afrikana ihany koa dia manome ireo toerana kely kokoa sy ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fomba mahomby sy mahomby mivantana mba hanatonana ny varotra, ny haino aman-jery ary ny mpandeha amin'ny tsenan'ny fizahan-tany mety ho an'i Afrika. Ny tanjona dia ny hanatratrarana ny fahaiza-manao fizahan-tany eo an-toerana, ary ny toby fizahan-tany ao an-toerana sy anatiny Afrika mba hampihenana ny fiankinan-doha amin'ireo mpizahatany Eoropeana sy Amerikana.
Ny fihanaky ny valan'aretina COVID-19 dia nampianatra lesona iray fa tokony hiankin-tena amin'ny fizahantany i Afrika. Ny fanakatonana sy ny fameperana fitsangatsanganana napetraka tany Eropa, Etazonia, Azia ary tsenam-pizahantany hafa mety hisy fiantraikany amin'ny fizahantany afrikanina
Mahazo mpizahatany 62 tapitrisa eo ho eo amin'ireo mpizahatany maneran-tany maherin'ny arivo tapitrisa isan-taona i Afrika. Mahazo mpizaha tany efa ho 600 tapitrisa eran-tany i Eoropa.
Ny Biraon'ny fizahantany eto amintsika dia manery ny hisian'ny vondrona fizahan-tany isam-paritra. Dingana tsara mankany amin'ny tanjon'ny fandaharan'asan'ny Afrikana ny fahitana ny EAC ho vondrona mifanome tanana amin'ny fomba mirindra sy mirindra tsara.
ATB dia hanao fampirantiana ao amin'ny Qatar Travel Mart (QTM) hatao amin'ny tapaky ny volana novambra. Nanasa ireo minisitry ny fizahantany afrikanina izahay handray anjara, mikendry ny hisarihana mpizahatany bebe kokoa hitsidika an'i Afrika ary hisarihana ihany koa ny fampandrosoana ny fizahantany anatiny Afrikana.
eTN: Ahoana no namaritan'ny filankevi-pitantanan'ny fizahantany Afrikana ny fampirantiana voalohany momba ny fizahantany any Afrika Atsinanana (EARTE)?
NCUBE: Ny fizahantany any amin'ny faritra EAC dia voa mafy. Ny Sekretera EAC dia nanambara ny fihenan'ny fizahantany isam-paritra manodidina ny 67.7 isan-jato tamin'ny taon-dasa (2020) ho 2.25 tapitrisa eo ho eo ireo mpizahatany iraisam-pirenena, very 4.8 lavitrisa dolara amerikana avy amin'ny fidiram-bolan'ny mpizahatany.
Ny faritry ny EAC dia efa nanantena ny hisarihana mpizahatany 14 tapitrisa tamin'ny 2025 talohan'ny fipoahan'ny valan'aretina COVID-19 dia nisy fiantraikany ratsy tamin'ny fironana.
Ny faritra EAC dia tsy manana afa-tsy 8.6 isan-jaton'ny fidiram-bolan'ny fizahantany aty Afrika ary 0.3 isan-jaton'ny fizahan-tany manerantany.
Kenya sy Tanzania dia ohatra tsara amin'ny vondrona isam-paritra ho avy izay ahafahan'ny mpizaha tany miampita sisintany mba hijery avy eo hankafizana ireo loharanon-karena iombonana.
Ny Birao Afrikana momba ny fizahantany dia miara-miasa amin'ny governemanta Afrikana sy ny andiana masoivoho mpamatsy vola mba hampiroborobo ny fifandraisana eo amin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana sy ny mpilalao fizahan-tany.
Tsy misy fizahan-tany raha tsy misy ny fiaraha-monina. Ambasadaoron’ny fizahantany ny fiarahamonina. Ny fizahan-tany amin'ny fizahantany any Afrika dia mifototra amin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana.
eTN: Raha ny fijerin'ny ATB, inona no dikan'ny fandraisana anjara amin'ny EARTE voalohany?
NCUBE: Dingana tsara mankany amin'ny tanjon'ny fandaharam-potoana Afrikana ny fahitana ny EAC ho vondrona mifanome tanana ho toy ny vondrona iray fa mifanohitra amin'ny fizarana tsirairay izay tsy hitondra antsika na aiza na aiza amin'ny maha-kaontinanta azy.
Jereo, voamarikay ny fanenjehana nataon’ny filohan’i Tanzania, Samia Suluhu Hassan, izay tompon-daka sy mpisava lalana amin’ny paikady fampandrosoana an’i Afrika amin’ny alalan’ny fizahantany. Notoloran'ny ATB ny filoha Samia loka ho an'ny fizahantany kaontinantaly 2021. Nijoro mafy izy rehefa niverina tamin'ny laoniny ny sehatra tao anatin'ny areti-mifindra Covid-19.
Ny filohan'i Zanzibar, Dr. Hussen Mwinyi, dia nanangana ny ARTE isam-paritra isan-taona any Tanzania mba hifandimby eo amin'ny firenena mpikambana tsirairay. Ity fampirantiana rezionaly ity dia hanamarika an'i Afrika ho toerana tokana isafidianana, miaraka amin'ny fifantohana amin'ny vokatra kaontinanta. Mila manapaka ny sakana isika.
eTN: Efa namoaka fepetra fanarenana ve ny ATB mba hiverenan'ny sehatry ny fizahantany?
NCUBE: Miara-miasa amin’ireo firenena afrikanina ny Birao afrikanina momba ny fizahantany amin’ny fanentanana ny fanarenana ny fizahantany any Afrika Atsinanana sy Afrika. Mampihatra ny tambajotram-barotray isam-paritra sy maneran-tany ary ny fampitam-baovao izahay mba hamporisika mpitsidika bebe kokoa hamandrika avy eo hitsidika an'i Afrika.
Ny ATB dia manitatra ny fahafahana amin'ny varotra, ny fifandraisana amin'ny besinimaro, ny fampiasam-bola, ny marika, ny fampiroboroboana ary ny fananganana tsenan'ny fizahan-tany manokana.
Amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpikambana ao amin'ny sehatra tsy miankina sy ho an'ny daholobe, ny Birao Afrikana momba ny fizahantany dia manatsara ny fitomboana maharitra, ny lanjany ary ny kalitaon'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany any Afrika.